Nagu Saabsan - Dongguan Taiyang Fabric Chemicals Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 1999, TY waa soo-saare shirkad soo-saare kiimiko isku-dhafan ah oo laxiriirta xajmiga daabacaadda dharka, bond aqua; R&D, wax soo saarka, iibinta dharka dharka iyo dheeha, wakiilka dharka iyo wixii la mid ah.
TY waxay leedahay qalab hantiyeed oo go'an oo loogu talagalay diyaarinta gawaarida 'auxiiaries', sida fal-celinta xirmooyinka 23, qalabka tijaabada 251, qalabka cabirka 8 xabbadood. Taiyang Dharka kaabayaasha farsamada iyo alaabada soosaarka, TY waxay aasaastay xarumo ama waaxyo u adeegaya sida cilmi baarista & horumarka, tijaabada wax soo saarka, wax soo saarka, suuqgeynta, arrimaha maamulka iwm.
Ganacsiyada waaweyni waxay ka kooban yihiin taxane agab daabacaadeed dhar-daabis ah: dhar-daabacaad dhar-adkeyn ah oo adkayn, ku-dhajiil cad, dhajiyeyn nafaqaysan iyo dhajiyeyn hufan, iwm
TY waxay had iyo jeer u hoggaansamaysaa ujeedada shirkada ee Daacadnimada iyo Aaminaada, Tayada koowaad, Tayada Macaamiisha, iyo inay si adag u raacdo ujeeddada lagu fulinayo maareynta shirkada, si loo ilaaliyo alaabada xasilloon oo la isku halleyn karo oo leh xulashooyin kala duwan oo ballaaran, JIT gaarsiinta, isla markaaba adeegga iibka TY wuxuu had iyo jeer siiyaa mudnaanta ugu sarreysa ama danaha, horumarka guud iyo wada-noolaanshaha macaamiisha, si ay ula socdaan adeegyo farsamo oo kaamil ah iyo inay la kulmaan baahiyaha ugu badan ee qanacsanaanta macaamiisha.
Hawlgalku wuxuu marayaa in si adag loo raaco IS09000 2000 iyo Nidaamka Hubinta Tayada Caalamiga ah ee IS014000. Alaabada ay soo tijaabisay Xarunta Imtixaanaadka Qaranka ee Dharka Qaranka waxay si buuxda ula dhacsan yihiin GB / T18401 ~ 2003 Xeerka Farsamada Amniga Qaranka ee Amniga Dharka.
Waxyaabaha hormuudka u ah ayaa loo qaybiyaa taxane kaabayaal dhar-sidaha ah, sida maldahan dufanka leh, saliida silikoonka ah, bilaa-xarka leh kareemka xorta ah, kareemka xorta ah, saliida jilicsan, dheecaanka iyo dhammaynta, hagaajinta iyo xaraashka, dharka, iwm, taxanaha qoraallada auxllaries-sun-saaridda. , deoiling, ka saarida miridhku, goynta birta, ka saarida lacquer, phosphating.
Laanteenna Vietnam ayaa la furay sanadka 2019, Waxaa jira afar shaqaale waqtigan xaadirka ah.
Cinwaanka: No.42 / DC62, NA1 Wadada, Yuexin Warshadaha Warshadaha, Shunjiao, Gobolka Shunan, Gobolka Pingyang, Vietnam
Madoobaha iyo diyaarinta daaweyn firfircoon oo dusha sare ah oo loo adeegsado dhogorta dhogorta iyo / ama shirkadaha ganacsiga.